Shirka Golaha Iskaashiga ee dowlad Goboleedyada dalka oo maanta Furmayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waxaa maanta la filayaa in si rasmi ah uu Magaalada Kismaayo oo xarun KMG u ah maamulka Jubbaland ka kaga furmyo Shirka Golaha Iskaashiga ee dowlad Goboleedyada dalka,kaasi oo Shalay lagu dhawaaqay in uu baaqday.
Shirka waxaa ka qeyb galaya madaxda ugu sareeysa dowlad Goboleedyada dalka iyo wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya Micheal Keating.
Qodobada looga hadli doono Shirka la filaayo in Saacadaha soo socda uu Kismaayo ka furmo ayaa waxaa ka qeyb ah sidii xal buuxa looga gaari lahaa khilaafka u dhaxeeya dowlad Goboleedka Jubbaland iyo dowlada dhexe Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa laga hadli doonaa Shirka kheyraadka dib u dhiska ciidanka, xaalada guud ee dalka iyo sidii looga dhabeyn lahaa heshiisyo ay horey u kala gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada.
Magaalada Kismaayo oo xarun KMG u ah maamulka Jubbaland ayaa waxaa ku sugan Madaxweynayaasha dowlad Goboleedyada dalka ka jira sida Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare,Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf,Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ,Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan,kuwaasi oo Shir maanta uga furmaayo Kismaayo.
Amaanka Kismaayo ayaa Shalay iyo maanta si weyn loo adkeeyay,iyadoo la xiray Wadooyinka soo gala iyo kuwa kabaxa Guriga martida Jubbaland,hlkaasi oo la filaayo in lagu qabto Shirka Golaha Iskaashiga ee dowlad Goboleedyada dalka.
Somalia oo ka faa’iidaysanaysa lacag dhan $60 milyan oo Shiinuhu u qoondeeyey Afrika